SomaliNet Magazine: DIINTA - SU’AALIHII UGU YAABKA BADNAA OO LA WADIIYAY SHIIKH CABDULLAHI AL-NUURI IYO JAWAABOHOODII
Waddan kasta oo ka mid ah waddamada Muslimiinta wuxuu leeyahay dad culumo ah oo aad u yaqaan diinta Islaamka. Dadkaas culumada ah bulshada inteeda kale ayaa waydiiya arrin kasta oo diinta la xiriirta. Shiikh Cabadalla Al-Nuuri ayaa ka mid ah Culumada ugu waaweyn oo soo maray waddanka Kuwait . Shiikh Cabdalla kuma ekayn waddanka Kuwait oo kaliya, waxaa aad looga yaqaan waddamada Islaamka, gaar ahaan waddamada gacanka. Shiikh Cabdalla wuxuu barnaamij uu uga jawaabayo su?aalaha dadka ka sii dayn jiray Talefishanka waddanka Kuwait. Wuxuu ka jawaabi jiray su?aalaha diiniga ah iyo bulshada. Waqti kadib su?aalihii uu Tv-ga ka sii dayn jiray ayuu wuxuu ka dhigay buugaag uu u baxshay ?Sa?luunii? oo macnehedu yahay ?waa I waydiiyeen?. Buuggii kowaad markuu qoray ayuu maalin maalmaha ka mid ah waxaa loo soo diray waraaq aad uga yaabisay, markaas ayaa waxaa ku soo dhacday fikrad ah inuu qoro buug lagu magacaabo ? Min Qariib maa sa?aluunii? oo macneheedu yahay ?su?aalihii ugu yaabka badnaa oo la I waydiiyay? . Shiikh Cabdalla wuxuu aad ugu caan baxay inuu ka jawaabo su?aalaha diiniga ah iyo kuwa arrimaha bulshada xiriirka la leh. Su?aalahaan iyo jawaabohooda aan doonayo inay akhristayashu ila qaybsadaan waa 66 su?aalood iyo jawaabohoodii. Qofkii carabiga fahmi kara wuxuu akhrisan karaa buugga ?Min qariib maa sa?aluunii? waxaa la qoray 1984-tii, waxaa daabacay ?Datu salasil?. Bishii hore waxaan soo qaadanay su?aashii ku saabsanayn labadii nin oo dilay wiilka yar.
Sheekadaydaan waa mid la yaab leh, waa suuro gal inaad ku qososhid ama ay dadka maqla ama akhristaa ay ku qoslaan. Waxaan ahay gabar jirta 35 sano, Aabahay wuxuu dhintay aniga oo jira 4 sano, hooyadayna waxay umul raacday aniga oo 3 jir ah, kadib markay dhashay walaalkay, sidaas ayaan aniga iyo laba wiil oo walaalahay iga yar-yar ah ku noqonay agoon iyo rajo. Waxaa na soo korisay hooyaday hooyadeed ?ayeeyo- waxay nagu soo korisay nolol qalafsan, waxay ka shaqayn jirtay guryaha dadka lacagta leh-booyeeso-. Maalin maalaha ka mid ah ayaa nin lacag leh gurigiisa si joogto ah uga shaqaalaysiiyay kaddib mrkii uu ogaaday inay carruur rajo iyo agoon ah koriso, waqtigaas waxaan jiray 9 sano, waxaan dhiganayay fasalka labaad ee dugsiga hoose. Ninka ay ayayday u shaqayso wuxuu ahaa nin wanaagsan, aad ayuu noo dhaqaalayn jiray, wax kasta oo aan guriga ama iskuulka uga baahano isaga ayaa noo gadi jiray. Ayayday waa ay iska dhaaftay shaqadii, saas oo ay tahay isaga ayaa na soo booqan jiray. Mar kasta oo aan arko gacanta ayaan ka dhunkan-shummin- jiray isaguna madaxa ayuu iga shummin jiray, waxaan dareemay inaan jeclahay. Da?dayda oo ah 18 sano iyo isaga oo qiyaastii jira 60 sano. Aabahay waxa xoolo ah noogama tagin, waxa kaliya oo uu nooga tagey guri duq ah, waa guri qiyaas ahaan ku fadhiya 170 mitir, waxaa dhacday in ayeeyday ay nin dayn nagu lahaa ay rahmad ahaan ugu qortay guriga si markaan lacagtiisa aan u siinno uu gurigu noogu soo noqdo, lacagta nala ku lahaa ma ahayn mid badan laakiin sidii hadba dulsaar (ribo) u sii fuulaysay ayay ka badatay guriga qiimihiisii, ninka deynta nagu leh wuxuu ahaa mid aad u naxariis daran. Ninkii odayga ahaa oo na dhaqaalayn jiray markii uu sheekadaan maqlay ayuu ninkii lacagta nagu lahaa siiyay lacagtii uu sheeganayay kaddibna wuxuu noo dhisay gurigii waliba waxaa intaas sii dheer inuu guriga magacayga ku qoray maadaama aan anigu u weynahay caruurta. Maalin maalmaha ka mid ah ayaan ku soo booqday gurigiisa, kaligiis ayuu ahaa, wuxuu I waydiiyay inaan doonayo inaan jaamacad galo iyo inaan u soo jeensado daryeelka walaalahay iyo ayeyday, wuxuuna talo ahaan iigu soo jeediyay inaan shaqo bilaabo maadaama ayeeyo qof weyn noqotay, markii aan sii bixi lahaa ayuu lacag ii soo taagey oo I yiri ? ayeeyo u gee si ay masruuf idiin kaga dhigto? meeshii la rabay inaan gacanta u soo taago oo lacagta ka qabto ayaan inta ku soo booday isku duubay kaddibna waa dhunkaday, waxaan ka war helay isaga oo iska kay durkinaya oo leh ?ma waalatay?? aniga oo ilmo iga daadanayso oo ooyaya ayaan ku iri ? adeer waan ku jeclahay? wuxuu iigu jawaabay ?anigu xataa waxaa idiin jeclahay sidii caruurtayda oo kale? waxaan ku iri ? waxaan ku jeclahay jacaylka ay ragga iyo dumarku is jeclaadaan? wuxuu igu yir ? ha ka tagin xikmadda iyo caqliga?. Aniga oo isku xishoonaya ayaan gurigiisii ka soo baxay, salaantii nagama uusan goosan. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu na soo booqday wuxuuna ii soo bandhigay inaan guursado nin dhallin yaro ah oo uu isagu yaqaan, wuxuuna ku sheegay inuu yahay nin fiican oo leh wax kasta oo haweenay ay nin ugu xilato, waxaan u sheegay inaan hal mar ah wax jeclaaday markaasna aan isaga jeclaaday, qof aan isaga ahayna aanan niyad u hayn. Maalintaas laga bilaabo wuxuu iska ilaalin jiray inaan meel labadaydu ku kaliyaysano, wuxuuna ku dadaali jiray inuu markii walaalahay ama mid ka mid ah ama ayeeyo ay joogto uu ila hadlo. Maalin ayuu waraaq ii soo diray uu ku leeyahay ?hebel ayaa iga kaa soo doonay ee ha diidin, waa nin ku dhaqan kara, fursaddaana ha lumin waayo fursaddu mar kasta sooma noqnoqoto. Waqtigaas waxaan jiray 22 sano waa ka diiday taladii, waxaana ugu jawaabay ? guurku wuxuu u baahan yahay qof niyad u haya, oo qalbigiisu soo jeedo, indhihiisu ay wax arki karaan, carrabkiisuna hadli karo, anigase qalbigaygu adiga ayuu kugu mashquulsan yahay, indhahayguna adiga kaliya ayay kuu jeedaan, kugu khasbi mayo inaad I guursatid kumana waydiisanayo inaad I guursatid, waxaa igu filan inaan ogahay inaad ladan tahay markasta dhinacaaga ay iiga soo yeeraan wax wanaagsan oo aan ku farxo, waxaana kaa codsanayaa inaadan mar danbe ii soo bandhigin qof guur doon ah.
Hadda waxaan jiraa 35 sano, qiyaas ahaantiina hadahaaa wuxuu jiraa 80 sano, mar kasta oo munaasabad ciid ama ramadaan ay jirtana asxaan ayuu ii sameeyaa. Muddo 10 neeyo sano ah isma aanaan arag. Waa ogohay in waqigii guurku iga tagey ayna yar tahay rajada inaan guursado iyada oo taasi jirto ayaanan haddana ka shallaysanayn, maskaxdaydana kuma soo dhicin inaan guursado, dad badan ayaa I soo doonay, kuwo toos ii soo abbaaray iyo kuwo isaga ii soo marayba, waana diiday kulligood, waxaan mar walba ku hamiyi jiray inaan isaga xaas u noqdo, haddii aanan xaas u noqona aan kalkaaliso u noqdo, rajooyinkaas oo dhan ma miro dhallin.
Walaalahay ayaan u shaqeeyay ilaa uu kii waynaa ka dhameeyay dugsiga sare kaddibna uu shaqo bilaabay, kii yaraa isagu caajislow ayuu noqday, ciidammada ayuu ku biiray, labadoodii waa guursadeen waana shaqaystaan. Ninkii odayga ahaa aad ayuu u caawiyay walaalahay. Hadda walaalahay iyo ayeyday oo cad ah ayaan gurigayagii iskula nool nahay.
Su?asha aan qabaa waa: Danbi miyaa inaan diiday inaan guursado? Sababata aan guurka u diiday waa aniga oo aaminsan inaanan ninka aan guursado xaqiisa ka soo bixi karin oo uu la kulmayo qof aan niyad u hayn. Adiga oo mahadsan ayaan jawaab kaa sugayaa!
JawaabTii Shiikh Cabdullahi Al-nuuri:?
Su?aasha aad I soo waydiisay oo ku saabsan inay banaan tahay iyo in kale in qofku guurka iska daayo isaga oo awooda, culumada fiqigu waa ka hadleen waxayna u qaybiyeen sidaan:
Guurku waa ku waajib qofkii awooda isla markaasna ka cabsi qaba inuu xaaraan ku dhaco. Taas macneheedu waa xaaraan in qofkii awooda oo ka baqaya inuu xaaraan ku dhaco uu iska dhaafo guurka.
Guurku waa sunne haddii qofku awoodo laakiin uusan ka baqayn inuu xaaraan ku dhaco.
Nabiga calehi salaatu wa salaam (CSW) ayaa yiri ?guurku wuxuu ka mid yahay sunnadayda, qofkii iska daaya sunadayda naga mid ma ahan?
Qofkii aan awoodin guurka, waa karaahiyo inuu guursado, laakiin qofkii aan awoodin laakiin hela qof ku qaadanaya cudurkaas waa guursan karaa, laga yaabee in Ilaahay mar caafimaadiyo.
Culumadu waxay in badan ka hadlaan ninka, wali ma arag meel looga hadlayo qof dumar ahi haddii ay guurka iska dayso, sababtuna waa maadaama dumarka iyaga la guursado oo ayan iyagu wax guursan. Waxaan u arkaa in qofkii dumar ah oo awoodda inay ka soo bixi karto xuquuqda guurka inay xaaraan ka tahay inay guurka diido iyo nimacada hooyo nimada.
Jacaylka aad jeclaatay ninkaas odayga ah oo asxaanka badan idiin samayn jiray, waxaa isugu kaa darsamay adiga oo yaraanimo ku waayay hooyo iyo aabbe isla markaasna uu idiin sameeyay asxaan badan kadibna aad dareentay xanaanadiisa, taas ayaa keentay inaad u qaadatay inaad u jeceshay sidii nin oo kale, guurku waa ka duwan yahay asxaan qof kuu sameeyay, caawimaad iyo xanaanany dheeraad ah. Guurku waa mustaqbalka nolosha, waa shirkad iyo wax isku darsi ku dhisan is fahan labada dhinac.
Si kastaba arrintu ha ahaatee Ilaahay xaqa ha kugu soo hanuunino, waana suuro gal haddii nin ku guursado inuu kuu soo celiyo furayaashii dhumay ee qalbigaaga. Ilaahay ajar ha kaa siiyo sida wanaagsan oo aad walaalahaa iyo ayeeyaydaa u gacan qabatay, xaq ayaad u leedahay inaad ku cudur daaratay inaadan doonayn inaad qof dulmisid, adiga ayaa naftaada naga badsha noloshaadana naga og.